Phaphama! | No. 4 2017
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Ukraine IsiBemba IsiBengali IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCatalan IsiCebuano IsiChewa IsiChiyao IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLozi IsiLuganda IsiLuvale IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMyanmar IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNepali IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPapiamento (Sase-Aruba) IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSuthu (SaseNingizimu Afrika) IsiSwahili IsiSwahili (SaseCongo) IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTonga IsiTonga (SaseMalawi) IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTwi IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ingabe umatasa kakhulu? Uma kunjalo, awuwedwa. Umagazini i-The Economist uthi, “Yonke indawo abantu bamatasa kakhulu.”
NGO-2015, kwenziwa inhlolo-vo kubasebenzi abaqashwe ngokugcwele emazweni angu-8, abaningi bathi kunzima ukukwenza kokubili, umsebenzi nezinto zasekhaya. Into eyenza lokhu ukuthi kunezinto eziningi okumelwe bazenze emsebenzini noma ekhaya, banezindleko eziningi futhi basebenza amahora amaningi. Ngokwesibonelo, abasebenzi baseMelika abaqashwe ngokugcwele bathi kudingeka basebenze amahora angaba ngu-47 ngesonto. Kubasebenzi abahlanu cishe oyedwa kubo usebenza amahora angu-60 noma ngaphezulu!
Kwenye inhlolo-vo eyenziwa emazweni angu-36, abasebenzi abangaphezu kwekota kwababuzwa, bathi abasitholi ngisho nesikhathi sokuphumula! Nezingane zingaphazamiseka uma kunezinto eziningi kakhulu okufanele zizenze.
Uma siqhubeka senza okungaphezu kwalokho isikhathi esisivumela ukuba sikwenze, siyohlale simatasa bese siyacindezeleka. Singakwazi yini ukulinganisela kwesikwenzayo ekuphileni? Izinkolelo zethu, izinqumo nemigomo yethu kudlala yiphi indima? Okokuqala, cabanga ngezizathu ezine ezenza abanye benze okungaphezu kwamandla abo.
1 ISIFISO SOKWENZELA UMNDENI WAKHO OKUNGCONO
UGary ongumzali uthi, “Ngase ngingene ngomkhono nesiphanga emsebenzini wami njengoba ngangisebenza izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Ngangifuna ukwenzela izingane zami okungcono kakhulu. Ngangifisa zithole izinto engingakwazanga ukuzithola ngisakhula.” Naphezu kwezifiso zabo ezinhle, abazali kudingeka bahlole ukuthi yini ebalulekile. Ucwaningo lubonise ukuthi izingane nabantu abadala abathanda kakhulu izinto nemali bavame ukunganeliseki ekuphileni futhi bagule kakhulu kunalabo abangazithandi izinto.
Izingane ezikhula zazi ukuthi ukuba nezinto eziningi yikho okubalulekile, azijabuli neze
Abanye abazali bazithwalisa bona kanye nezingane zabo imithwalo eminingi ukuze baqiniseke ukuthi izingane zabo ziyaphumelela ekuphileni. Umphumela uba ukucindezeleka kwabo nezingane zabo.
2 UKUFUNA IZINTO ESINGAZIDINGI
Abezentengiselwano basenza sikholelwe ukuthi uma singayithengi imikhiqizo yabo emisha kukhona okusilahlekelayo. Umagazini i-The Economist uthi abantu abaningi ‘abanaso isikhathi esanele sokukhetha ukuthi bathenge ini, babuke ini noma badleni’ esikhathini esincane abanaso.
Ngo-1930, isazi sezomnotho sabikezela ukuthi intuthuko kwezobuchwepheshe yayizokwenza abasebenzi babe nesikhathi esiningi sokuphumula. Sasishaye phansi kwashunqa uthuli! U-Elizabeth Kolbert ongumbhali wephephandaba i-New Yorker wathi, ngenxa yokuthi kunezinye izinto abantu abazifunayo, basebenza amahora amade ukuze bathole imali eyengeziwe yokuzithenga okwenza bangasheshi bahambe emsebenzini.
3 UKUFUNA UKUJABULISA ABANYE
Ezinye izisebenzi zisebenza amahora amade ukuze zijabulise abaqashi bazo. Izisebenzi nazo ziyayifaka ingcindezi kwezinye ukuze zizizwe zinecala uma zingasebenzi amahora amaningi. Ukuntengantenga komnotho nakho kungabangela abanye abantu ukuba bavume ukusebenza amahora amade noma ukusebenza noma nini uma befuneka.
Ngokufanayo, abanye abazali bazizwa becindezelwe ukwenza njengeminye imindeni enokuphila okumatasa. Uma bengakwenzi lokho, babona sengathi bancisha izingane zabo okuthile okungcono.
4 UKUFUNA UKUHLONISHWA NOKWANELISEKA
UTim ohlala eMelika uthi: “ Ngangiwuthanda umsebenzi wami futhi ngizimisela lapho ngiwenza. Ngangizwa sengathi kufanele ngibatshengise ukuthi abalenzanga iphutha lapho bengiqasha.”
NjengoTim, abaningi bathi ukuba matasa kubenza bazizwe bebaluleke kakhudlwana. Umphumela? U-Elizabeth Kolbert, esimcaphune ekuqaleni uthi, “Uma umatasa ubhekwa njengomuntu ophumelele ekuphileni.” Uyanezela: “Uma umatasa kakhulu uhlonishwa kakhulu.”
IBhayibheli likhuthaza ukukhuthala nokusebenza kanzima. (IzAga 13:4) Liphinde likhuthaze nokuthi silinganisele. UmShumayeli 4:6 uthi: “Kungcono ukuphumula okuncane kunomsebenzi onzima omningi nokulwela ukufica umoya.”
Ukulinganisela kusisiza siphile kahle emzimbeni nasengqondweni. Kodwa singakwazi yini ngempela ukulinganisela kwesikwenzayo? Yebo singakwazi. Nazi izinto ezine ezingasisiza:
1 KWAZI OKUBALULEKILE NEMIGOMO YAKHO
Kuyinto evamile ukufisa ukuba nemali eyanele. Kodwa engakanani imali eyanele? Yini ngempela ebonisa ukuthi umuntu uphumelele ekuphileni? Iholo noma izinto anazo? Ngakolunye uhlangothi, ukuphumula nokungcebeleka ngokweqile nakho kungakudlela isikhathi.
UTim esixoxe ngaye ekuqaleni uthi, “Mina nomkami saxoxa ngokuphila kwethu, sanquma ukunciphisa kwezinye izinto. Senza ishadi elalibonisa lokho esasikwenza ngaleso sikhathi ekuphileni kwethu kanye nendlela entsha esase sifuna ukuphila ngayo. Saxoxa ngemiphumela yezinqumo esasizenze ngesikhathi esidlule, nalokho okwakuzomelwe sikwenze ukuze sishintshe ukuphila kwethu.”
2 UNGAVUMI UKUTHONYWA ABEZENTENGISELWANO
IBhayibheli lisikhuthaza ukuba silawule ‘isifiso samehlo.’ (1 Johane 2:15-17) Izikhangiso zingenza umuntu asebenze amahora amaningi noma azitike ngokweqile ngokungcebeleka okumba eqolo. Yiqiniso, ungase ungakwazi ukuzibalekela zonke izikhangiso. Kodwa ungakwazi ukugwema ezinye zazo. Ungakwazi nokuhlola ngokucophelela ukuthi yini oyidinga ngempela.
Khumbula ukuthi abantu ozihlanganisa nabo bangaba yithonya kuwe. Uma bethanda izinto noma bekala impumelelo yomuntu ngezinto anazo, kungaba ukuhlakanipha ukufuna abangane abakwazi kahle okubalulekile ekuphileni. IBhayibheli lithi, “Ohamba nabahlakaniphile uyohlakanipha.”—IzAga 13:20.
3 UNGASEBENZI NGOKWEQILE
Khuluma nomqashi ngomsebenzi wakho nangalokho okubalulekile kuwe. Ungazizwa unecala ngokuthi unezinye izinto ezibalulekile ngaphezu komsebenzi. Incwadi ethi Work to Live ithi: “Labo ababeka imingcele phakathi komsebenzi nezinto zasekhaya noma bangcebeleke ngezikhathi ezithile, bathola ukuthi ngesikhathi bengekho emsebenzini, izinto zisale ziqhubeka njengokuvamile.”
UGary esikhulume ngaye ekuqaleni owayecaphuna kusale wanquma ukunciphisa amahora awasebenza emsebenzini. Wathi: “Ngakhuluma nomndeni wami, sanquma ukushintsha indlela esasiphila ngayo. Sazama ukukwenza lokho, kancane kancane. Ngaya kumqashi wami ngamtshela ukuthi ngifuna ukusebenza izinsuku ezimbalwa ngesonto, wavuma.”
4 UKUBA NDAWONYE NJENGOMNDENI KUBALULEKILE
Abantu abashadile kufanele bachithe isikhathi esiningi bendawonye kanti nezingane ziyasidinga isikhathi sokuba nabazali bazo. Ngakho, kugwemeni ukuzama ukulingisa imindeni ehlale imatasa. UGary usinika leli cebiso, “Yibani nesikhathi sokuphumula, ningenzi izinto ezingabalulekile.”
Lapho nindawonye njengomndeni, ningavumeli ukuba ithelevishini, amaselula noma eminye imishini yobuchwepheshe inihlukanise komunye nomunye. Idlani ndawonye okungenani kanye ngosuku, nisebenzise leso sikhathi ukuze nixoxe njengomndeni. Lapho abazali bekwenza lokhu, izingane zabo ziyajabula futhi zenza kangcono nasesikoleni.
Sebenzisani isikhathi sokudla ukuze nixoxe
Ekuphetheni, zibuze: ‘Yini engiyifunayo ekuphileni? Yini engiyifunela umndeni wami?’ Uma ufuna ukuphila okujabulisayo nokunenjongo yenza izinto ezibonisa ukuthi uyasisebenzisa iseluleko esihlakaniphile esitholakala eBhayibhelini.
Ezobuchwepheshe Zidla Isikhathi
Ingabe ama-tablet namaselula adla isikhathi noma ayasonga? Kuya ngokuthi uwasebenzisa kanjani.
Emsebenzini: Imishini yezobuchwepheshe ephathwayo ingenza kube lula ukuba izisebenzi zikhethe ukuthi zizosebenzela kuphi nokuthi zizosebenza nini. Kodwa ingaphinde yenze izisebenzi zicindezeleke ngoba kuzolindeleka ukuba zisheshe zitholakale noma nini uma zifuneka emsebenzini, ngisho noma kusebusuku.
Ekhaya: Amaselula angonga isikhathi ngokuthi enze kube lula ukuba imindeni ihlele lokho ezokwenza. Kodwa angaphinde antshontshe isikhathi somndeni. Ucwaningo lubonisa ukuthi lapho abazali benaka imishini yabo yezobuchwepheshe kunokunaka izingane zabo, ezinye izingane ziyacindezeleka bese ayanda amathuba okuba ziphume esandleni.
Umsebenzi Nemali Ukuthula Nenjabulo
Indlela Yokubhekana Nokutubeka
Amacebiso amane angakusiza ukuba ungavumeli umsebenzi wakho ukulimaze.
Thumelela Thumelela Ingabe Umatasa Kakhulu?
ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI Ingabe Umatasa Kakhulu?
Inyoni Emangalisayo Okuthiwa I-⁠Arctic tern
‘Igama Elihle Lingcono Kunengcebo Echichimayo’
USIZO LOMNDENI Nizokwenzenjani Njengoba Izingane Sezihambile?
INGXOXO NOTHILE Umcwaningi Wobuchopho Uchaza Ngokholo Lwakhe
UMBONO WEBHAYIBHELI Isilingo
INGABE KWAKLANYWA? Umbala Oluhlaza Okwesibhakabhaka We-Pollia Berry
Ingabe IBhayibheli Lingangisiza Ngibe Nomndeni Ojabulayo?
Okubhaliwe Izindlela zokudawuniloda izincwadi PHAPHAMA! Ingabe Umatasa Kakhulu?
Okulalelwayo Izindlela zokudawuniloda okulalelwayo PHAPHAMA! Ingabe Umatasa Kakhulu?
Thumelela Thumelela PHAPHAMA! Ingabe Umatasa Kakhulu?
PHAPHAMA! Ingabe Umatasa Kakhulu?
Okushiwo IBhayibheli Ngomsebenzi